Kazakhstan: Ala Hamohamo sy Politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Avrily 2018 14:52 GMT
Nitondra ny vaovao sy ny tontolon'ny blaogy ho amina vanimpotoana maty ireo andiana andro tsy niasana tao Kazakhstan, taorian'ny lalàna nivoaka tamin'ny 2005 momba ny andro tsy fiasana ao amin'ny firenena, izay nahatonga ny Qurban Eid sy ny Krismasy Orthodox an'ny Kristiana ho andro tsy fiasana miaraka amin'ny fankalazana ny Taombaovao. Na izany aza, nisy fivoarana sasany noresahan'ireo blaogera, izay nahatsikaritra hamaivanan-doha tao anatin'ny sary iray manontolo.
Manoratra mikasika ireo sariitatra niainga tamin'ny ‘flash’ izay nivoaka tao amin'ny aterineto [ru] i Mantrovkz. Manasongadina mpilalao voakirakira tsara iray ilay zavatra fitaka, izay mampatsiahy ny filoham-panjakana:
“Kaimak Surets” [Sarina Krema Marikivy – Kaz] vitsivitsy no nanaovana ireo sariitatra miaraka amin'ny olona iray fotsiny ao ambadik'izany. Milaza izy fa mipetraka ao Kalifornia, miasa amin'ny orinasa iray misahana ny teknolojia avolenta ary milaza fa hipoitra matetika arakaraky ny valin'ny fivoarana ara-politika ao Kazakhstan re sariitatra. ”Izany no fijeriko ny zava-misy. Amin'ny maha-Kazakh ahy, tena mahatsiaro ny fireneko aho”, hoy izy.”
Mandritra izany fotoana izany, toa voavaha tampoka ilay raharaha Kashagan (fifandirana manodidina ny tany goavambe feno solika voajanahary ao Kazakhstan, tantanin'ny vondronorinasa ENI izay niatrika tsikera henjana sy tsindry avy amin'ny fanjakana Kazakh nandritra ny fotoana maro tany am-piandohan'ny fitrandrahana). Milaza i Stranno-m fa toa nanaiky tampoka tamin'ny fepetra tsy dia nampoizina loatra ny ankolafy Kazak — ho 120$ tapitrisa isantaona ihany no vola hiditra mandritra ireo 10 taona voalohany, latsaka 2 isan-jatony amin'ny vola miditra nandrasana tamin'ilay tetikasa.
”Raha ny marina, tsy mbola nisy zavatra notapahana taorian'ny adiady be toy ireny. Lalao tsy mitombina…”,, hoy izy sady gaga.
Manoratra ny ala hamohamon'ny ankizy Kazakh mpianatra ataony avy amin'ny alalan'ilay vaovao ara-panabeazana nankalazaina be i Aitazhi — ireo efitra fianarana ifandrimbonana izay heverina fa hampiray ny sekoly amin'ny ambaratonga ambony rehetra ao anatina tambajotranà torohay iray. Nohararaotin'ireo mpianatra izany tamin'ny alin'ilay ”lesona misokatra”, izay –toy ny nokasaina — dia tokony nataon'ny Praiminisitry ny firenena. ”Tonga dia niaraka nampiseho ilay hafatra ”Ndao hanao firaisana” daholo ireo efitra fianarana 900. Navoaka avy tao Shymkent izany, tanàna tatsimo, ary vetivety foana dia hita ireo ala hamohamo — mpianatra amin'ny kilasy faha-9 telo”. Voateny mafy izy ireo, fa ny mpampianatra azy ireo kosa dia voaroaka. Tsy niseho ilay Praiminisitra…